Ubungakanani ubukhosi baseKushhan?
Imbali kunye neNkcubeko Asia Ephakathi
Omnye woBukumkani bamaNdiya bokuqala bamaNdiya
Ubukhosi baseKushhan buqala ekuqaleni kwekhulu lokuqala lokuqala njengesebe laseYuezhi, intlangano yabantu base-Indo-Yurophu abanamaYuda abahlala kwimpuma ye-Asia ephakathi. Abanye abaphengululi badibanisa amaKushans kunye namaTokim eThabathi yaseTarim e- China , abantu baseCaucasia abanama-mummies abomvu okanye abomvu baye bahlala bephazamise ababukeli.
Kulo lonke elawula ukulawula kwalo, ubukhosi baseKushan bwandisa ukulawula kwiindawo ezininzi ze-Asiya yase-Asia yonke indlela eya kwi-Afghanistan namhlanje kunye nayo yonke indawo yaseNdiya-kunye nayo, i-Zoroastrian, i-Buhhdism kunye neenkolelo zamaGrike zasasazeka ukuya kwiChina ukuya empuma nasePersia bucala ngasekunene.
Emalunga ne-AD 20 okanye 30, amaKushans aqhutyelwa ngasentshonalanga yi- Xiongnu , abantu abanobukrakra mhlawumbi babekhokho ba-Huns. AmaKushans abalekele kwimida yezinto ezikhoyo ngoku e- Afghanistan , ePakistan , eTajikistan nase- Uzbekistan , apho babeka umbuso ozimele kwindawo ekuthiwa yiBactria . E-Bactria, banqoba amaSkiti kunye nezikumkani zase-Indo-Greek zasekhaya, iindawo zokugqibela zokuhlasela kweAlexandria Omkhulu ezahluleka ukuthatha iNdiya .
Kusuka kule ndawo ephakathi, ubuKhosi baseKushan baba yintengiso yezorhwebo phakathi kwezizwe zaseHin China , iSassanid Persia kunye noBukumkani baseRoma. Igolide yaseRoma kunye nelikaTshayina bashintsha izandla kwi-Empire yaseKushhan, bajika inzuzo enhle kubantu base-Kushan.
Ukunikezelwa kwabo bonke oonobumba babo obukhulu bemihla, akumangalisi ukuba abantu baseKushan bavelise inkcubeko kunye nezinto ezibalulekileyo ezibolekwe kwimithombo emininzi.
Ngokuninzi i- Zoroastrian , amaKushans nawo aquka iinkolelo zamaBuddha kunye namaGrike kwizenzo zabo zonqulo. Imali ye-Kushan ibonisa oothixo kuquka i-Helios kunye neHeracles, uBuddha no-Shakyamuni Buddha, kunye no-Ahura Mazda, iMithra kunye nonqulo lomlilo waseZoroastrian u-Atar. Kwakhona basebenzisa iilfabhethi zesiGrike eziye zatshintshela ukuba zithethe ngokubhekiselele kuKushhan.
Ubukhulu bobukhosi baseKushhan
Ngomthetho wesihlanu umbusi, uKhanka Omkhulu ukusuka kwi-127 ukuya ku-140 ubukhosi baseKushan buye buqhubela yonke indawo enyakatho yeIndiya waza wandisa empuma kwakhona ukuya kwi-Basim yaseTarim-ilizwe lokuqala lakwaKushans. I-Kanishka yawulawula esuka ePeshawar (njengamanje iPakistan), kodwa ubukumkani bakhe babuquka iidolophu ezinkulu zeSilk zaseKashgar, iYarkand kunye neKhotan kwizinto ezikhoyo namhlanje kwi- Xinjiang okanye kwi-East Turkestan.
Kanishka wayengumBuddha ozinikeleyo kwaye uthelekiswa noMlawuli weMauryan uAshoka Omkhulu kulo mbandela. Nangona kunjalo, ubungqina bubonisa ukuba wayekunqula unkulunkulu wasePersi uMithra, owayengumgwebi kunye noothixo.
Ngethuba lokulawula kwakhe, uKanishka wakha i-stupa yokuba abahambi baseTshayina babike malunga neekhilomitha ezili-600 eziphezulu kwaye bahlanganiswe ngamagugu. Izazi-mlando zazikholelwa ukuba ezi ngxelo zazenziwe zaze zaza zafunyanwa kwi-Peshawar ngo-1908. Umlawuli wakha le stupa enhle ukuba ahlale emathambo amathathu eBuddha. Ukubhekisela kwi-stupa kuye kwafunyanwa kwimiqulu yeBuddh eDunhuang, eChina. Enyanisweni, abanye abaphengululi bakholelwa ukuba i-Kanishka yaya kwiTarim yayiyiziganeko zokuqala zaseChina kunye nobuBuddha.
Ukunciphisa nokuwa kwamaKushi
Emva kwe-225 CE, ubukhosi baseKushhan bunqothula kwisigxina esentshona, esasisondele ngokukhawuleza sagqithwa yi-Sassanid Empire yasePersia , kunye nesahluko esisempuma kunye nenqununu yayo ePunjab. Ubukhosi basempumalanga yeKushan bawa ngosuku olungaziwa, mhlawumbi phakathi kwe-335 no-350 CE, ukuya ku- Gupta ukumkani waseSamudragupta.
Sekunjalo, impembelelo yoBukumkani baseKushan yanceda ukusasaza ubuBuddha kwiindawo ezininzi ze-Asia yaseMpuma neMpuma. Ngelishwa, ezininzi iinkqubo, iinkolelo, ubugcisa kunye neetekisi ze-Kushans zatshatyalaliswa xa ubukhosi behlile kwaye ukuba kungengenxa yeembali zembali zaseburhulumenteni baseTshayina, le mbali ingase ilahleke ngonaphakade.
Yayibuphi Ubuso beSafavid?
Iigosa zeSihogo eDerze, eTurkmenistan
Iilori ezinexabiso eliphezulu lokuhlaziywa
Indlela yokufaka iFuse kwi-Ford yakho ye-2005-2009
Iigrama zeGraam 2015 IRekhodi Yonyaka Abaqeshwe
Iingcamango zeCode yeAidid & Basic Science Fair
Ukuqonda i-Economics: Kutheni Imali Ixabisa?
Amaqela aphezulu ase-Baltimore Orioles
Ukuqonda i-Brake Fade kunye nendlela yokuKhusela
U-Undertaker-Yintoni eyinyani kwaye yiyiphi ingqungquthela yemizi?
Unengqiqo kwaye uvakalelwa
Yintoni iVerb Intransitive?
Ngaba Ufanele Uyenze Ikholeji Yokhetho?
Iindlela zokusingatha izithintelo: I-Delphi Programming